Wararka Ruushka - "Nidaamka Baradhada" majaladda
Silsiladda makhaayadda McDonald ee Ruushka waxay heli doontaa magac cusub
Bogga guriga Madaxa News Wararka Ruushka
Qalabka dhijitaalka ah ee Nebosvod ee gaadiidka hawada aan duuliyaha lahayn, oo uu sameeyay qof degan Skolkovo Foundation, ayaa caawin doona diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee beeraha. U gudubka "caqli"...
McDonald's wuxuu sii wadi doonaa inuu ka shaqeeyo suuqa Ruushka hoostiisa calaamad kale iyo mulkiilaha cusub
Xusuusnow in 14-kii Maarso, McDonald's si ku-meel-gaar ah u hakiyay hawlihii shabakadda ee Ruushka. Sababaha ayaa si rasmi ah loogu sheegay inay ku adag tahay saadka iyo arrimo farsamo....
Habka falanqaynta dareenka ayaa kaa caawin doona in la aqoonsado cudurrada dhirta marxaladda hore
Saynisyahano ka tirsan Machadka Cilmi-baarista ee All-Ruushka ee Ilaalinta Dhirta (VIZR) ayaa horumarinaya hab cusub oo loogu talagalay la socodka iyo ogaanshaha cudurrada dhirta - farsamada dhawaaqa hyperspectral, ayaa sheegay ...
Ruushka waxa la siin doona kaabash badan, karootada iyo toonta Iran
7-dii April, kulan shaqo ayaa magaalada Moscow ku dhex maray madaxa Rosselkhoznadzor Sergey Dankvert iyo wasiir ku xigeenka warshadaha, macdanta iyo ganacsiga ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah...
Wasaaradda Beeraha ee Gobolka Chelyabinsk ayaa ka wada hadashay suurtagalnimada in laga fogaado ku tiirsanaanta soo dejinta ee wax soo saarka abuurka khudradda iyada oo loo marayo horumarinta gobolka ...
In gobolka Chelyabinsk soo bandhigay saddex nooc oo cusub oo baradho ah
Gobolka Chelyabinsk wuxuu awood u leeyahay inuu si buuxda isu bixiyo baradhada. Gobolka, waxa laga beeraa boqolkiiba afartan in ka badan inta la cuno. Si kastaba ha ahaatee, ka hor ...
Shabakadaha ganacsiga ayaa waxaa soo food saartay gabaabsi dhanka khudaarta ah ee dhulka furan iyo qiimo koror xoogan oo ku yimid iyaga oo ay ugu horeeyaan kaabajka iyo...
Awoodda dukaamada khudaarta ee Dagestan waa la labanlaabmi doonaa
Awoodda xarumaha kaydinta khudradda iyo khudradda casriga ah ee Dagestan ayaa la qorsheeyay in la labanlaabo. Tani waxay dabooli doontaa baahida ka jirta gobolka ee khudaarta iyo miraha...
Bog 1 laga bilaabo 25 1 2 ... 25 Xiga